Trump ayaa loogu hanjabay maxkamad haddii uu ka reebo tallaalka Covid-19 New York… – Hagaag.com
Trump ayaa loogu hanjabay maxkamad haddii uu ka reebo tallaalka Covid-19 New York…
Posted on 14 Nofeembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Qareenka dowlad-goboleedka New York ee dalkaasi Mareykanka Letitia James ayaa maxkamad ugu hanjabtay madaxweynaha dalkaasi Donald Trump kaas oo sheegay in uu gobollada Mareykanka oo dhan uu gaarsiin doono dawada tallaalka cudurka COVID 19 marka laga reebo New York.
Trump oo shir jaraa’id uu kaga hadlay arrimo kala duwan ku qabtay Aqalka Cad ayaa ku eedeeyay madaxda gobolkaasi in aysan aqbalin qorshaha tallaalka, sidaasna loogu diiday.
“Malaayiin dawada tallaalka COVID-19 ayaan u direynaa gobollada bisha April ee sannadka soo socda, marka laga reebo New York oo arrimo siyaasadeed aan isku hayno”, ayuu yiri Trump.
Guddoomiyaha gobolkaasi Andrew Cuomo ayaa dhawaan saluugay qorshaha qeybinta talaalkaasi oo uu sheegay in la doonayo in loo gacan-geliyo farmashiiyayaal khaas ah.
“Ma dooneyno in aan tallaalkaasi siino gobol aan dadkiisa sida ugu dhakhsiyaha badan ku gaarsiineyn kuwaas oo aan ogahay in ay aad ugu baahan yihiin”, ayuu markale yiri Trumo.
Shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ayaa isbuucaan soo saaray tallaalkan looga hortagayo COVID-19 kaas oo ay sheegeen in boqolkiiba 90% uu ka hortagayo.
“Marki dawadaasi la bilaabo qeybinteeda haddii uu wali sii jiro maamulka Trump islamarkaana uu caqabad ku noqdo in New York hesho, waxaan la tiigsan doonnaa maxkamadda oo aan hubno in aan ku guuleysan doono”, Letitia James.
Dhanka kale, madaxweynuhu ma uusan qiran in laga guulaystay, mana uusan carabaabin Joe Biden. Waa markii ugu horeysay ee madaxweynuhu uu kasoo hormuuqda saxaafadda tan iyo intii doorashada ay dhacday.